Izindleko ze-Akhawunti yeBhange lase-Offshore Ukuvula i-akhawunti entsha
Izindleko ze-akhawunti yase-Offshore Bank
Iningi labantu lisungula ama-akhawunti asebhange ase-offshore ukuvikelwa kwempahla kumacala okusolwa kanye nokuzimela kwezezimali. Awuthengi i-drill ngoba ufuna ukushayela. Uyithenga eyodwa ngoba ufuna imbobo. Ngakho-ke, akudingeki nje sibuze ukuthi, "Iyini izindleko zokusungula nokugcina i-akhawunti engaphandle kwezwe?" Kudingeka futhi sibuze, "Iyini izindleko zokuvikela, ukuvikela impahla nokuzimela kwezezimali?"
Ngakho-ke, ukuvikelwa kwempahla nobumfihlo bezezimali, umthetho wokuqala kungukuthi uvule i-akhawunti ngegama lakho. Yivule egameni lebhizinisi elingasogwini, i-LLC noma i-trust. Ake sithi igama lakho nguPat Smith. Ufaka imali usuka ebhange wehla ngomgwaqo uye e-akhawuntini ephethwe ngu "Pat Smith." Umzila wokuhambisa nge-wire ushiya irekhodi elide lokuthi une-akhawunti phesheya kwezilwandle. Kungakho sivame ukuvula ama-akhawunti asebhange aphesheya kwezilwandle ngaphansi kwegama lezinkampani noma ama-trust.
Lokhu kwandisa ubumfihlo, ngoba ucingo ludluliselwa ngaphakathi nangaphandle amabhange ase-offshore ukuthengiselana kwenziwa ngaphansi kwegama lenkampani, hhayi umuntu. Imali yokusetha yokuvula i-akhawunti yasebhange engasogwini imvamisa iphakathi kwe- $ 550 kuya ku- $ 1,250. Lokhu kuya ngebhange namandla. Inkampani engasolwandle ngokujwayelekile isebenza phakathi kwe- $ 1,685 ne- $ 2,495. Ngakho-ke, inani eliphelele livame ukuba yi- $ 2,235 liye ku- $ 3,745 kuwo womabili.
Zingaki Amabhange Asemaphandleni Akhona?
Ngokuvumelana ne I-Quora, kunezinkampani ezilinganiselwa ku-14,600 emhlabeni njengale mibhalo. Kodwa-ke, amabhange ambalwa kakhulu azovula ama-akhawunti kubantu bezinye izizwe, ikakhulukazi labo abavela e-US, UK, Canada noma e-Australia. Ngaphezu kwalokho, kunezinhlobo eziningi zezinga lezinsizakalo ezivela enhle futhi ezanelisayo ezingenzi lutho olungathandeki. Ingabe imali yakho izophephile? Ungathembela kubanki? Cabanga ngakho. Lena yimali yakho. Ufuna isipiliyoni esimnandi nesiphephile sebhange kude nomugqa wokuqala.
Kunenqwaba yama-super ephephile, amabhange anikezela ngomsebenzi omuhle. Kepha kunamabhange amaningi kakhulu laphaya ukuthola lawo afanele ngokugundeka kwi-Intanethi. Indlela engcono yokuthola ukubuza umuntu oke waba khona ngaphambili; ikakhulukazi umuntu osungule ama-akhawunti abantu kude nolwandle izinkulungwane zabantu. Ngakho-ke, qasha uchwepheshe. Kungakufanelekela ukutshalwa kwemali okuncane ukuze ukuthole kahle okokuqala. Uma ufuna imininingwane eminingi kunenombolo yocingo nefomu lokubonisana kulesi sikrini. Finyelela bese uwasebenzise ngokunenzuzo.
I-Offshore banking idinga uhlelo lokusebenza, inkuthalo efanelekile nediphozi yokuqala yokuqalisa i-akhawunti yakho. Isicelo sivame ukuqondile. Inegama lakho, ikheli kanye nenombolo yocingo. Ngokujwayelekile uzonikeza isilinganiso esingesihle sokuthi uhlose ukubeka imali engakanani futhi uhoxise kanye neminye imininingwane.
Impela, ufuna ubumfihlo. Kepha awufuni ubumfihlo obuningi kangangokuba umuntu ozenza sengathi ungangena ebhange akhiphe imali yakho. Ngakho-ke, ngenkuthalo efanele, efana nekhophi elibhalwe phansi lephasiphothi yakho, kudingeka umthethosivivinywa wensiza yokuqala nezinhlamvu zezethenjwa. Badinga ukwazi ukuthi uma othile ebiza, ama-imeyili noma engena ebhange ukuyocela imali ukuthi ngabe nguwe ngempela. Imininingwane yakho izoba yimfihlo. Kepha ufuna ukuthi imali iye kuwe, hhayi umuntu othi nguwe. Lesi isizathu esikhulu esenza bacele omazisi.
Kuyisici sokuqina kwezomnotho lapho abantu bezwe lakho becabanga ukuthi amabhange abo aphephile futhi aphephile. Lesi isimiso somhlaba wonke. Ngakho-ke, umphakathi wamazwe omhlaba uhlangana minyaka yonke eBasel, eSwitzerland ukuza nezindinganiso zamabhange aphesheya. Ngabe ibhange lizokwazi ukuthatha isikweletu esingakanani uma liqhathaniswa nempahla yasebhange? Kufanele kugcinwe imali engakanani? Yiziphi izinyathelo okudingeka bazithathe ukuze bangenise ubugebengu kanye nokuxhaswa ngemali kwamaphekula ngaphandle kohlelo?
Elinye lamandla aziwa kakhulu osebhange lolwandle yiCayman Islands. Lapha ungafunda nge Inkampani ye-Cayman ne-akhawunti.
Ngakho-ke, esinye isizathu sokuthi amabhange adinga inkuthalo efaneleyo ukuthi afuna ukwamukela “abafana abalungile” futhi abalele “abantu ababi.” Ungafuna ubumfihlo. Kepha futhi ufuna imali yakho iphephe futhi itholakale. Ngakho-ke, awufuni ukuthi abalawuli bamazwe omhlaba bavale ibhange futhi likhulule imali yakho. Lokho kuzokwenzeka uma wabelana ngebhange ngokuvela kabusha kwe-Osama Bin Laden. Amabhange akagcini nje ngokucela amadokhumende ngoba anama-nosy. Bafuna wena namanye amadiphozi niphephe. Ngaphezu kwalokho, abafuni ukulahlekelwa amalayisense abo asebhange ngokwamukela ngokungakhathali abantu ababi ohlelweni.
Isizathu Sokuba Abangenzi Imikhuba
Ukwenza konke lokhu kukhuthala okufanele izindinganiso zamazwe omhlaba akuzona mahhala. Kubiza imali. Ngakho-ke, yingakho ukuvula i-akhawunti kude nonxweme kubandakanya imali yokusetha. Ibhange ngeke lifake engcupheni yokulahlekelwa yilayisense lazo bese leqa inqubo efanele yokukhuthala nemithethonqubo yakho-yamakhasimende (KYC). Ungathi uyigilosa elihle noma gal enhle. Kodwa-ke, ibhange alikwazi. Ngakho-ke, bazodinga ukuthi ukuveze lokho.
Ibhange ngeke lidlule imiyalo ngoba ubabiza ngokudubula umlilo uphuma emlonyeni wakho. Ngeke bakwenze okuhlukile ngoba weqa phezulu nokwehla njengenkawu eshayayo ngoba bathatha isikhathi eside kakhulu noma bacela imininingwane eminingi. Abalawuli bendawo bahlala behlola amabhange. Badinga ukuqiniseka ukuthi amabhange ahlole wonke amabhokisi ngokusethwa kwe-akhawunti ngayinye. Ngakho-ke, ungalindele ukuthi uJehova uzokunika i-wink nodded. Lokho wukuthi, ngeke bakulondoloze ekhanda ngoba uvila kakhulu ukuthi ungathola ipasipoti noma incwadi yesethenjwa yasebhange. Ngeke basengozini yokulahlekelwa yilayisense yabo. Bancamela ukumane badlulele kwikhasimende elilandelayo elihamba nohlelo.
Imali yebhange ye-Offshore
Izimali zokugcina zanyanga zonke zingaqala kusuka ku- $ 20 ziye ku- $ 100, noma kunjalo. Izimali zokudluliswa kwentambo zivame ukusuka ku- $ 25 ziye ku- $ 75. Uma ufuna i-akhawunti lapho ungatshala khona emakethe yesitoko kunezikhungo lapho ungazithengisa wedwa. Kukhona futhi izikhungo lapho ungaba nemenenja yemali enolwazi ukukwenzela imali, ngokuvuma kwakho. Abaphathi bemali bavame ukukhokhisa iphesenti elincane lemali abayisebenzelayo. Ngokwemvelo, izinhlobo zezimali nemali ekhokhwayo iyahluka ngesikhungo. Zingaba ngaphakathi noma ngaphandle kwamabanga ashiwo lapha.
Amanani emalimboleko akhokhelwa kudiphozithi, imali yanyanga zonke kanye nezinhlobo zama-akhawunti ziyehluka. Izikhungo eziningi zezimali ezingaphesheya zinamanani wokuncintisana ukuze zikhange abakhokha imali. Amanani emalimboleko akhokhelwa phesheya avame ukuba aphezulu kunezikhungo zasekhaya. Inqubo yokuqalwa kwe-akhawunti yakho yasebhange engaphesheya izobandakanya imali yokufaka, izindleko zenkokhisa kanye nezindleko ezimbalwa ezixubile. Lezi zinto zingafaka izinto ezifana nezindleko zamanxusa, njll. OffshoreCompany.com isize izinkulungwane zabantu ukuvula ama-akhawuntali angasese, izinkampani kanye nokuthembana. Ngakho-ke, sizitholele thina futhi singasiza ngalezi zidingo namuhla.
Thola ukuthi yiliphi igunya nebhange okulungile kuwe kulula. Mane nje usebenzise inombolo noma ifomu lokubuza ngaphezulu bese uchaza izidingo zakho.